Zimbabwe inmates seek right to vote :: Harare24 News
Zimbabwe inmates seek right to vote
Published: 16 July 2017 (254 Views)
Incarcerated MDC officials who are currently serving jail time for murder want to be given the right to vote in next year's elections.
The three, Yvonne Musarurwa, Tungamirai Madzokere and Last Maengahama who are serving prison terms of 20 years each after they were convicted last year for murdering a policeman petitioned the High Court seeking an order compelling authorities to allow them to cast votes in next year's general election.
The trio is seeking an order compelling Justice, Legal and Parliamentary Affairs minister Emmerson Mnangagwa, Zimbabwe Electoral Commission (Zec) chairperson Justice Rita Makarau and Zec as the elections management body to register them on the national voters' roll and facilitate their voting on election day.
The prisoners want Zec to make the necessary arrangements to ensure that prisoners are registered as voters on appropriate voters' rolls and to ensure that they vote on any election relating to them.
They include Zimbabweans dotted around the globe who left the country at the height of the economic meltdown while some fled because of Mugabe's government's failure to respect human rights.
Tags: Inmates, Vote, Zimbabwe,